यस्पाली पनि उखुको मुल्य अझै निर्धारणा हुन सकेन, किसान मर्कामा !! – Dhukdhuki fm
यस्पाली पनि उखुको मुल्य अझै निर्धारणा हुन सकेन, किसान मर्कामा !!
in जनसरोकार / राष्ट्रिय खबर / सर्लाही बिशेष — by admin —	December 3, 2017
सर्लाही, मंसिर १७ – तराइको नगदे बालीको रुपमा रहेको उखुको यस क्रसिङ्ग सिजनका लागि अझै मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन । मंसिरको अन्तिम साताबाट उखु क्रसिङ्ग सुरु हुने भएपनि मुल्य निर्धारण नभएपछि सर्लाहीका उखु किसान चिन्तित भएका हुन । बिगतका बर्ष जस्तै यस वर्ष पनि मुल्य निर्धारणका लागि काठमाडौमा त्रिपक्षिय बार्ता गरिए पनि बिना निष्कर्ष टुगींएको छ ।
बार्ताका लागी आउदो २७ गते फेरि बैठक बोलाईएको नेपाल उखु उत्पादक महासघका राष्ट्रिय अध्क्षय कपिलमुनी मैनालीले जानकारी दिनुभयो । खेतमा रहेको उखु बेचेर हिउँदे बाली लगाउन तयार परेका किसानहरु समयमा नै उखुको मुल्य निर्धारण नभएपछि थप चिन्तित बनेका हुन ।
यस बर्षको क्रसिङग सिजनका लागि उखुको मुल्य ५ सय ६२ रुपैयाँ कायम हुनु पर्ने अध्क्षय मैनालीले बताउनुभयो।उखु उत्पादनमा किसानको लागत बर्षै्नि बढिरहेकाले पोहोर भन्दा कम मुल्य स्वीकार्य नहुने अध्यक्ष मैनालीको भनाइ छ ।
उद्योगीले भने यसपालि अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा नै चिनीको मुल्य दैनिक रुपमा घटेकाले पोहोरको मुल्य प्रति क्विन्टल ५३१ रुपैयाँमा उखु खरिद गर्न नसकिने अडान राखेको छ । किसानको माग अनुसारको मुल्य ५६२ रुपैया पाउन सरकारले चिनीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने उद्योगीहरुको माग छ ।